Aanga'oonni motummaa ragaa ittisaa Baqqalaa Garbaa hafan - BBC News Afaan Oromoo
Aanga'oonni mootummaa olaanoo ragaa ittisaa hoggantoota paartii Koongirasii Federaaliistii Oromoo ta'uun mana murtiitti akka dhiyaatan ajajaman har'as hin dhiyaanne.
Abukaatoon himatamtootaa Obbo Abduljabbaar Huseen ajaja mana murtiin qaamaan biraan gahuu isaaniifi boru dhiyaachuu akka danda'an mana murtiif ibsanii jiru.
Dhimma ministirri muummee polisiin qabamanii akka dhiyaatan gaafatame irratti manni murtii ajaja hin laanne.
Gama biraan ammoo fayyaan isaanii haala gaarii irra kan hinjirre, Obbo Baqqalaa Garbaa yaala akka argataniif abukaatoon isaanii gaaffii dhiyeessanii ture. Manni murtii ammoo boru deebii itti kennuuf beellama qabatee jira.
Obbo Baqqalaan kan dhukkubsatan dhiibbaa dhiigaa du'aaf nama saaxilu jechuun ibsuun hatattamaan ajajni akka kennamuuf Obbo Abduljabbaar gaafatanillee, manni murtii boru jechuun bulcheera.
Dhaddachi yakka afraffaa mana murtii olaanaa federaalaa, oolmaa har'aa isaa kanaan ragaalee ittisaa himatamaa 14ffaa Darajjee Margaa dhaggeeffatee jira.
Akkasumas ragaalee ittisaa himatamtoota galmee kana jala jiranii ta'anii akka dhiyaatan mana murtiin kan ajajaman sirreeffamtoonni manneen sirreessaa qilinxoofi qaalliittii jiran, bulchiinsi manneen sirreessaa irra deddeebiin osoo hin dhiyeessiin hafee jira.
Ragaa ittisaa Obbo Baqqalaa Garbaa mana sirreessaa qaallittii irraa akka dhiyaatan kan ajajaman Obbo Andu'aalam Arraagee, manni sirreessaa osoo hin dhiyeessiin hafee jira.
Dhimma raawwachiisaan mana sirreessaa qaallittii, obbo Andu'aalam Arraagee murtiin cimaa kan itti murtaa'e waan ta'aniif dhiyeessuun akka isaan rakkise mana murtiif ibsan.
Obbo Andu'aalem dabalatee ragaalee ittisaa mana sirreessaa irraa akka dhiyaatan ajajaman hunda borutti akka dhiyeessan manni murtii ajaja dabarsee jira.
Gama biraatiin iyyata himatamtoonni koree Walqaayit abbaan murtii Zara'aay Waldasanbat jedhamu akka dhaddacha irraa kaafamu gaafatan manni murtii kuffisee jira.
Abbaan murtiichaa dhimmaa Walqaayit irratti barreeffama ejjennoo keenyaan faallaa ta'e marsariitii tokko irratti waan barreesseef murtii madaalawaa nuuf kennuu hin danda'an jechuun ture akka dhaddacha irraa kaafamu kan gaafatan.
Manni murtichaa garuu dhimmichi kallattiin yakka isaan ittiin himatamaniin wal hin ilaallatu jechuun gaaffii isaanii kuffisee jira.
Muummichi Ministiraa humnaan mana murtiitti akka dhiyaatan gaafatame
'Hokkara Hararii warri qindeessan leellistoota sirna duriiti'
Ayyaana Cuuphaa Gondaritti waltajjii jigee namoota galaafate ogeessi ijaare maal jedha?
Finfinneetti kirkirri lafaa rektar iskeelii shan tahutu uumame
Dubartoonni bebbeekamoo 'saal-qunnamtiif maallaqni kumaatamaan kennamaaf'
'Dantaa siyaasaaf warra hokkara kaasanirratti tarkaanfii fudhachaa jirra'
Biyyi waan namaa hin barbanneefi haqaan addunyaarratti tokkofaa taate eenyu?
Doktorri sobaa elektiriikiidhaan miidhaa gessisuusaatiin to'annaa jala oolfame
Vaayirasiin haaraa Chaayinaatti mul'ate namatti akka daddabaru mirkanaa'e